Maitiro ekuvanza mafoto nemavhidhiyo mune iyo iPhone gallery | IPhone nhau
Maitiro Ekuvanza Mapikicha uye Mavhidhiyo mu iPhone Garari
IOS isisitimu yekushandisa iri kuita shanduko "dzakakosha" kubva pakauya Tim Cook, Apple CEO uyo akauya mushure meSteve Jobs anga anyanya kukanganiswa mumashoko aya. Kuvanza mafoto pa iPhone ne iPad kwaive kurota chaiko, pachokwadi kwave nekushandisa muIOS App Store iyo yakaedza kuita iri basa rakaoma. Nekudaro, neIOS 13 pakati pezvimwe zvinhu isu takave nemukana wekugadzirisa iyo system zvisati zvamboitika. Isu tinokuratidza neiyi yakapusa dzidziso kuti ungaviga sei mapikicha nemavhidhiyo mune iyo iPhone gallery mune imwe nguva.
1 Maitiro ekuvanza mafoto mu iPhone gallery
2 Maitiro ekuona iwo mafoto atakaviga
Maitiro ekuvanza mafoto mu iPhone gallery
Ichi chiito chinogona kuitwa zvakananga muPikicha application, uye ndiko kubatsira kwayo, zvakapusa unofanirwa kutevedzera anotevera matanho:
Vhura iyo App mapikicha pane yako iPhone kana iPad
Pinda «Photo Library» kana iyo albamo Recent kusarudza pikicha
Vhura pikicha yaunoda kuviga
Dzvanya bhatani mugove kubva pakona yezasi yekurudyi
Bhura pasi pasi menyu kusvikira wawana sarudzo Viga
Kana iwe ukadzvanya iwe unowana chiziviso chekuti pikicha ichaendeswa kune imwe albha, iwe unofanirwa kungoigamuchira
Zviri nyore uye nekukurumidza iwe wavanza pikicha kubva kuAlbum Recent or of the Photo raibhurari kubva kune yako iPhone.
Maitiro ekuona iwo mafoto atakaviga
Nekudaro, izvi hazvidzime pikicha kana kuita kuti isasvikike, zvinongo fambisa kune imwe albha inonzi Yakavanzwa.
Dzvanya pane iyo tebhu Albums
Sarudza album Akavanzika
Ikoko iwe unowana ese iwo mafoto awakange iwe waimbove wakaviga. Nehurombo hapana sarudzo inoratidzwa yekuwedzera password kune ino albham kana kuisa mapikicha aya muchivande. Zvirinani unogona kuvaburitsa kunze kwekuwana nyore, kana zvirizvo zvaunogadzirisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Maitiro Ekuvanza Mapikicha uye Mavhidhiyo mu iPhone Garari
Lifx inogadzirisazve mashandisiro ayo nenhau dzinonakidza
Maitiro ekutora yakareba yekuratidzira pikicha neiyo iPhone